भोलि देशभरका आकस्मिक बाहेक सबै स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने घोषणा
काठमाडौँ : सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै १९ औं पटक अनशनरत डा. गाेविन्द केसीको मागप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले आइतबारदेखि कडा आ’न्दो’लनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । संघले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आइतबार देशभरका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरुमा आकस्मिक र कोभिड–१९ का सेवा बाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा ठप्प पर्ने घोषणा गरेको छ ।
२७ दिनदेखि आमरण अनसनरत डा. केसीको जीवन रक्षाका निम्ति सरकार गम्भीर नभएको र वार्तालाई सीमित गराएको भन्दै भोलि आइतबार आकस्मिक र कोभिड–१९ बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
सरकारी वार्ता टोली र डा. केसी पक्षबीच शुक्रबार मध्यराति करिब डेढ घण्टा भएको वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । बिहीबार भएका सहमतिबाट पनि सरकार पछि हटेको केसी पक्षले आ’रोप अगाएको छ । डा. केसीका समर्थकले काठमाडौंको माइतीघरसहित मुलुकका विभिन्न स्थानहरुमा प्र’दर्शन गरिरहेका छन् ।